Himalaya Dainik » फेसबुकमा सर्वाधिक लोकप्रिय यी ५ नेपाली नायिका, पहिलो नम्बरमा काे ?
फेसबुकमा सर्वाधिक लोकप्रिय यी ५ नेपाली नायिका, पहिलो नम्बरमा काे ?
रेखा थापा नेपाली चलचित्र उद्योगमा ‘सुपरस्टारडम’को ल्याकत राख्ने एउटै नायिका हुन्। उनको चलचित्रमा नायक को हुन्छन भन्ने कुराले खासै महत्व राख्दैन्। उनको नामै चलचित्र सफल हुन पर्याप्त हुने गरेको छ।
उनको भेरिफाइड पेजमा ३३ लाख ७५ हजार भन्दा बढि लाइक छ जुन दोस्रो स्थानमा रहेकी प्रियंका कार्की भन्दा झण्डै दोब्बर बढि हो। रेखा थापा फाउण्डेसनबाट समाजसेवा र रेखा फिल्मस्बाट चलचित्र निर्माणमा सक्रिय रहेकी थापा राजनैतिक रुपमा समेत सचेत नायिका मानिन्छन्। फेसबुकमा सक्रिय रहेकी थापाले लगातार पोस्ट गरेकी छिन् जसमा फ्यानहरुले लाइक र कमेन्टको वर्षा गर्ने गरेका छन्।
उनको भेरिफाइड फेसबुक पेजमा २१ लाख ७६ हजार भन्दा बढि लाइक छ।
नायिका नम्रता श्रेष्ठ नेपाली चलचित्र उद्योगकी सुन्दर नायिकामा पर्दछिन्। उनको करिअरलाई झण्डै तहसनहस पारेको ‘से क्स स्क्या ण्डल’लाई बिर्साउँदै उनले जुन फड्को मारिन त्यसलाई जति प्रशंसा गरेपनि कमै हुन्छ। श्रेष्ठको भेरिफाइड पेजमा १५ लाख १९ हजार भन्दा बढि लाइक छ जुन दोस्रो नम्वरमा रहेकी प्रियंका कार्की भन्दा केही हजार मात्र कम हो।
नायिका केकी अधिकारी पछिल्लो समयमा चलचित्र उद्योगमा आएकी राम्री र चर्चित नायिका मध्येकी पर्दछिन। निकै शालिन व्यक्तित्वकी धनी अधिकारीको अभिनय क्षमता समेत अब्बल मानिन्छ। उनको भेरिफाइड पेजमा १० लाख ४६ हजार भन्दा बढि मानिसले लाइक गरेका छन्।
५. सुष्मा कार्की
बोल्ड र बिन्दास नायिकाको छवि बनाएकी सुष्मा कार्की फेसबुक लोकप्रियताका आधारमा चौथो नम्वरमा छिन्। उनलको भेरिफाइड पेजमा ७ लाख ९३ हजार भन्दा बढिले लाइक गरेका छन्। कार्की दर्शकमाझ सेक्सी नायीकाको रुपमा परिचित छिन्। उनका पोस्टमा तस्विर र भिडियो पनि देख्न पाइन्छ।
कार्यक्रम प्रस्तोता, मोडल हुँदे चलचित्र जगतमा छिरेकी कार्कीले मेरो एउटा साथी छ बाट डेब्यु गरेकी थिइन् । उनको भविष्यमा राम्रो गृहिणी र चलचित्र निर्माता बन्ने रहर छ।